Ciidanka AMISOM oo lagu bedelayo ciidamada Eriteriya iyo ItoobiyaMuqdisho Online - Caasimada Muqdisho. Somalia | Muqdisho Online - Caasimada Muqdisho. Somalia
Home Wararka Ciidanka AMISOM oo lagu bedelayo ciidamada Eriteriya iyo Itoobiya
Ciidanka AMISOM oo lagu bedelayo ciidamada Eriteriya iyo Itoobiya
Ayada oo ciidamad dowladda Soomaaliya aysan weli awoodin inay si buuxda ula wareegaan ammaanka dalka, ayaa wargeyska waxa uu qoray in hogaamiyayaasha Ethiopia iyo Eritrea Abiy Ahmed Ali and Issayas Afeworki ay diyaar u yihiin in ciidamadooda ay buuxiyaan booska AMISOM.
Wargeyska The Indian Ocean Newsletter ayaa qoray in Eritrea ay durba 5,000 oo askari u diri doonto Soomaaliya marka ay ciidamada Amisom billaabaan bixitaankooda.
MOL aya akhristayaasha u soo gudbisay bilihii lasoo dhaafay in heshiiska uu MW. Farmaajo la galay dalalka Itoobiya iyo Eriteriya uu ka codsaday in ciidamada AMISOM lagu bedelo ciidamado ka socda labada dal ee uu lagalay heshiiska is dhexgalka geeska Afrika, isagoo raja ka qaba in uu xukunka ku haysto xoog iyo cudud ciidamo shisheeye.
Previous articleWasiir Beyle: Intaan la ansixin miisaaniyadda 2019, away xisaab xirkii miisaniyaddii 2017/2018?
Next articleDhaawacyadii Muqdisho la keenay oo ay Villa Somalia diiday in la soo bixiyo (Sababta)
Maxeey tahay sababta Xilka looga qaaday Aadan Sheekh Cali Fiidow (Xalane oo xilkiisa loo dhiibay iyo tuhan culus oo taagan)
ruux Aroos ahaa oo ku geeryooday Shil gaari oo Muqdisho ka dhacay!!
Dowlada Ingiriiska oo markii ugu horeeysay u aqoonsatay Somaliland dal xur ah (Aqriso)
Wararka January 7, 2019